Mayelana NATHI - Hangzhou Zhongchuang Electron Co., Ltd.
I-Hangzhou Zhongchuang Electron Co., Ltd.kuyinto professional nomkhiqizi zokuhlanganisa R & D, ukukhiqizwa kanye yokuthengisa "Zhongchuang" uchungechunge ezishisayo ukuhlolwa amathuluzi. Njengamanje, inkampani inabasebenzi abangaphezu kwe-120, kufaka phakathi amathalente asezingeni eliphakeme angama-23 aneziqu eziphakathi neziphakeme neziqu ze-master noma ngaphezulu. Le mboni itholakala eKangqiao Industrial Park, eNorth Hangzhou Software Park. Le nkampani ihlanganisa indawo engama-7300 square metres nendawo yokwakha eyi-17500 square metres.
Le nkampani yaqala ukucwaninga nokuthuthuka kwezinsimbi zokuhlola ezishisayo ngo-1998, futhi isungule isibonakaliso sesibali esiphathekayo, i-generator yesiginali yedeskithophu, i-portable calibrator neminye imikhiqizo, esetshenziswa kakhulu emandleni kagesi, uphethiloli, imboni yamakhemikhali, ukusansimbi, imetroloji, ujantshi, indwangu , ukuvikelwa kwemvelo nezinye izimboni.
Le nkampani ingenise isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ye-2000 ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo. Le nkampani yanikezwa i-Hangzhou Information Port Enterprise ngo-2003 kanye ne-Hangzhou Enterprise Technology Centre ngo-2006. Ngo-2018, imikhiqizo eyishumi nesikhombisa yenkampani yayithole isitifiketi sikazwelonke selungelo lobunikazi kanti imikhiqizo eyisishiyagalolunye yayidlulile ekuhloleni impumelelo yeminyango yezokuphatha yezesayensi nezobuchwepheshe. ezingeni likazwelonke, lesifundazwe nelomasipala.
Inhloso yenkampani: "umkhiqizi oholayo wasekhaya wekhamera yokushisa" Amasiko akha inani futhi umkhiqizo unweba ikusasa. Abantu baseZhongchuang bazokwakha uhlobo olusezingeni lokuqala lwesizwe samaShayina ngenzwa entsha sha yokomoya, inqubekela phambili enhle kanye nokuqanjwa okusha okuqhubekayo.